Ikhandlela elinuka ngathi iMic libuyile, kulo nyaka ligama elithi Inspire, ukusuka kwishumi elinambini emazantsi | Ndisuka mac
Ikhandlela elinuka ngathi iMic libuyile, kulo nyaka ligama elithi Inspire, ukusuka kwishumi elinambini emazantsi
Kunyaka odlulileyo ngoku, ugxa wethu uPedro wasazisa ngentengiso ye Ikhandlela lokuqala elinuka kamnandi eMac. Amakhwenkwe Ilishumi elinambini eMzantsi, ngumxube wamavumba neziphumo zawo ziyafana nevumba elikhutshwa yiMac ngaphandle kwebhokisi yayo. Ikhandlela lokuqala ukubetha imarike lalinexabiso ngeedola ezingama-24 kwaye lathengiswa ngeveki ezimbalwa. Ngoku ukuba iphulo leKrisimesi liqala, sisipho esingenakho ukudelwa yiyo nayiphi na i-maquero. Inkampani iyayazi kwaye iyibeke kwimarike Inspire - Ikhandlela leMac # 2Ndiyathemba ukuba iya kuba nempumelelo efanayo nonyaka ophelileyo.
Ifomula ayibonelelwa, kodwa siyazi ukuba likhandlela Yenziwe nge-bergamot, kunye namanqaku emon, itarragon, i-amber kunye ne-musk. Le fomyula yahlukile kuleyo iboniswe kunyaka ophelileyo. Asazi ukuba kungenxa yokuba iMac ilitshintshile ivumba labo, okanye ngenxa yokuba inkampani ichaze ngakumbi ivumba leekhompyuter zethu esizithandayo.
Abavelisi bachaza ukuba ukongeza ukusikhumbuza ngevumba eliqhelekileyo leMac, ijolise ekwenzeni imeko leyo vumela ukucoca ingqondo kunye nokukhuthaza ukuyila. Bafuna ukudala ubudlelwane phakathi kweqela lethu kunye nengqondo yethu ukuze babe nengqondo ecacileyo nehlaziyiweyo esishukumisela ukuba sifezekise iinjongo zethu.
Kulo nyaka ikhandlela linobume oburhangqwe ukusuka ezantsi ukuya kwiindonga zeglasi kwaye ezi ndonga ziyindilinga. Yi Umbala omhlophe yaphukile kwaye igama lekhandlela livela ngoonobumba abancinci embindini weglasi. Okokugqibela, sinesiciko esifana nezantsi.
Ikhandlela linokuba njalo ukuthenga kwiphepha elishumi elinesibini laseMzantsi, Ngexabiso le- $ 29,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ikhandlela elinuka ngathi iMic libuyile, kulo nyaka ligama elithi Inspire, ukusuka kwishumi elinambini emazantsi
IGreenpeace ibeka iApple eqongeni kwiinkampani zobugcisa eziluhlaza
I-Super Vectorizer 2, isixhobo sobuchule kwixabiso lentengo